Sheekada filimka Judwaa 2: Mada daalo dhameestiran iyo bandhiga Varun oo heer sare ah u daawo filimkaan | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Judwaa 2: Mada daalo dhameestiran iyo bandhiga Varun oo heer sare ah u daawo filimkaan
Filimka weyn ee xiisaha badan Judwaa 2 ayaa maanta tiyaatarada la saaray waxaana filimkaan hogaamiye ka ah fariidka Bollywood-ka ee sare u kaca waalida ah sameenayo.
Jilaayaasha filimkaan: Varun Dhawan, Jacqueline Fernandez, Taapsee Pannu, Anupam Kher, Vivan Bhatena
Waqtiga uu soconaayo: 2-saac iyo 30-daqiiqo
Aan isla ogaano filimka Judwaa 2 sheekadiisa waxa laga dhahay, bandhiga jilaayaasha iyo filimkaan xaalkiisa Boxoffice-ka noqon karo ayagoo lagu cabiraayo fariintiisa sida loo dhaliilay ama loo amaanay.
Muxuu ku wanaagsan yahay Judwaa 2: shactiro dhameestiran, meel soo dhigo caqligaaga kadibna ku raaxeeso daawashada filimkaan Varun Dhawan min bilaaw ilaa dhamaad ku mada daalin doono.
Muxuu ku liitaa Judwaa 2: Malahan fariin adag sidoo kalena waa filim dhalinta iyo qoysaska kaliya loogu tala galay sidoo kalena dadka caqliga u saaxiibka ah ee tiyaatarada fariin cusub u aadaan masoo dhaweyn doonaan.
Daawo Ama Ha Daawanin Judwaa 2: Hadii uu ku seego filimkaan waxay ka dhigan tahay qosol min bilaaw ilaa dhamaad inuu ku seegay in bandhiga labad waji Varun Dhawan oo aan laga xiiso dhigeyn, hadii kale ka baaqso filimkaan hadii aa tahay qof rabo filim maan gal ah oo fariin adag xambaarsan
Sheekada Filimka Judwaa 2 Oo Kooban: Filimkaan wuxuu ka hadlaa labo mataano ah oo maalinta kowaad ifa kusoo biiraan kala lumayaan.
Rajiv Malhotra (Sachin Khedekar) wuxuu diyaarada gudaheeda kula kulmaa sheydaanka weyn Charles (Zakir Hussain) sidoo kalena wuxuu caawinaad ka geesanaa sidii ay booliska gacan ugu dhigi lahaayeen tuuga laga cabsado.
Isla waqtigaas Rajiv Malhotra (Sachin Khedekar) xaaskiisa Ankita (Prachee Shah Paandya) waxay dhalee labo wiil oo mataano ah.
Charles (Zakir Hussain) ayaa ku xiran isbitaalka Ankita laba wiil mataanaha ah ku dhashay marka uu baxsanaayo ayuu mid ka mid ah labada wiil horey usii qaadanaa.
Rajiv iyo Ankita waxay u qaadanayaan wiilkooda inuu dhintay kadibna magaalada London ayay u guurayaan sidoo kalena wiilkooda Prem (Varun Dhawan) wuxuu kusoo bar baaraa London asigoo ah wiil xishood badan sidoo kalena maskiin ah.
Dhinaca kale Prem walaalkiis la mataanka ah Raja (Varun Dhawan) wuxuu kusoo bar baaraa xaafada Versova ee Mumbai ka tirsan waana wiil qamarji ah sidoo kalena dadka dhan ka cabsadaan bil cagsina ku ah walaalkiis Prem.
Laakiin Raja dhibaato ayuu la kulmaa markii uu la dagaalo Alex (Vivan Bhatena) sidoo kalena uu si xun u dhaawaco waxaana wiilkaan dhalay burcadka weyn Charles.
Sidaa darteed Raja iyo saaxiibkiis Nandu (Rajpal Yadav) waxay u baxsanayaan magaalada London, inta ay safarka diyaarada kusii jiraan Raja wuxuu la kulmaa Alishka (Jacqueline Fernandez) kadibna meesha ayay isku jeclaanayaan.
Dhinaa kale Prem isagana wuxuu jecel yahay Samaira (Taapsee Pannu) taasi oo isaga Muusig barto laakiin arin la yaab leh ayaa dhaceyso marka Raja London imaado.
Labada mataanaha ah hal dhib ayay qabaan waa isku dareen hadii mid xanuun dareemo midka kalena wuu la dareemaa sidoo kalena marwalbo oo ay isku dhow yihiin dareenkooda waa isku mid farxad, murug iyo ficil ahaan!
Kadib waxaa xiga ficilo waali ah oo qosol badan oo ay sabab u yihiin Prem iyo Raja iyo sdoo kale qaybaha dambe waxaa loo daawan doonaa filimkaan sida ay isku fahmayaan Prem iyo Raja inay walaalo yihiin iyo dhibaatada kale ee soo wajihi karto qoyskaan.
Maxaa Laga Yiri Sheekada Filimka Judwaa 2: Director David Dhawan xeerkiisa kama lumin 20-sano ka hor Judwaa ayuu sameeyay oo shactiro dhameestiran lahaa, hadana isla Judwaa 2 sidaas ayuu ka dhigan waana filim lagu raaxeesan karo.
Xoogaa Judwaa 2 wuxuu kaga duwan yahay Judwaa 1 in qaybta labaad lagu badiyay shumiska iyo muuqaalada dhaqanka Hindiya lidiga ku ah waxaana ugu wacan xiligaan dhalinta Hindiya inay reer Galbeedka la jaan qaadaan.
Judwaa 2 qaybta hore si wacan ayaa loo diyaariyay qaybta dhexena xoogaa waa gaabis laakiin qaybaha dhamaadka filimkaan ayaan marnaba laga caajiseen.
Judwaa 1 ayaa dhacdooyin maangal ah iyo sheeko la aqbali karay lahaa balse Judwaa 2 waa filim min bilaaw ilaa dhamaad shactiro xad dhaaf ah leh sidoo kalena sheekadiisa maangal ma ahan caqliga wuu diidayaa kaliya mada daalada u dooro filimkaan.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Waaw Varun Dhawan waa talaabsaday sidoo kalena Judwaa 2 waa filim u qaas ah inaba caadi ma ahan sida uu ugu cadaalad falay doorkiisa labada waji.
Varun wuxuu dib kuu xasuusinaa Salman Khan iyo Govinda sida ay 90-maadkii daawadayaasha u mada daalin jireen waana jilaa door walbo sameyn karo shactiro, Dance iyo Action waana astaamaha atoore Super Star ku noqon karo.
Judwaa 2 u daawo min bilaaw ilaa dhamaad sida Varun Dhawan ugu raaxeestay filimkaan qaab jiliin ahaan hal meel oo cilad looga yeeli karo xidigaan malahan.
Jacqueline Fernandez wey yara dadaashay doorkeedana ma weyno ee kaliya waxay ka door wanaagsan tahay Taapsee Pannu oo filimkaan qurux iyo qaab kaliya ugu jirto waana ka xunahay Taapsee-dii Pink iyo Naam Shabana sameesay in sidaan loogu dayacay Judwaa 2!
Shactiroolae Rajpal Yadav waa soo laabtay dadkana qosolka ayuu ka dhameen doonaa hadaladiisa iyo muuqalada uu Judwaa 2 ku leeyahay.
Dhamaan jilaayasha kale ee door caawiye ku leh filimkaan waa kuwo heer sare ah oo sheekadana horey u dhaqaajinayaan waxayna u kala bandhig fiican yihiin sida qoraalka ugu kala horeeyaan Vivan Bhatena, Anupam Kher, Johny Lever, Sachin Khedekar iyo Prachee Shah Paandya.
Salman Khan muuqaalkiisa martida ah waa mid wacan waana mid kale oo ku xiiso galin doono marka uu Sallu shaashada la wadaago Varun Dhawan.
Gunaanad: Judwaa 2 waa filim shactiro iyo mada daalo dhameestiran leh, Varun Dhawan oo ku cajab galin doono, heesihiia oo heer sare ah iyo xili fasaxyo jiraan la daawan doono ayaa ka dhigay in Boxoffice-ka filimkaan gil gili doono.
Dadka filimada ka faaloodaan waxay siiyeen 3/5 taasi oo ka dhigan in mada daalo dhameestiran leeyahay waxaana sedexda xidig lagu siiyay bandhiga Classic ah ee Varun sameeya iyo filimkaan shactiradiisa oo heer sare ah.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimk Juwaa 2:
Waxaa Aqrisay 1,665
2 Responses to Sheekada filimka Judwaa 2: Mada daalo dhameestiran iyo bandhiga Varun oo heer sare ah u daawo filimkaan
wllhy filimkam wn sugi la ahay maalin kastaba saddex jeer ay mblkyga goos gooskisa ka daawada….
suhayma dahir maxamed
wwww varun dhawan waa akhtarjira